SALPIGLOSSIS: SII KORDHAYA ABUURKA, BEERASHADA IYO DARYEELKA EE SAWIRRADA BANAANKA AH - SOOSAARKA DALAGGA
Calpiglossis: beerashada iyo daryeelka ee dhulka furan
Ubaxyo kala duwan oo jilicsan-gambaleedka warshadani waxay sameeyaan aragti aan la leexin karin. Kalluumaysatadani waxay qurxin doonaan sariirta ubaxyada oo waxay noqonaysaa "caddayn". La kulan tan - salpiglossis. Baro wax badan oo ku saabsan beeritaanka iyo daryeesha dhirta berrinka bannaan.
Sulpiglossis waxaa iska leh qoyska Solanaceae; qiyaastii labaatan nooc oo kala duwan ayaa loo yaqaan guud ahaan. Waa warshad caleen ah oo toosan, dhuuban iyo inta badan jeexjeexday 15 ilaa 80 cm ee dhererka. Dushooda waxaa lagu daboolay villi ah. Nidaamka asaasiga ah ee warshadda waa isku dhafan: waxaa jira xidid weyn oo xididdada soo baxa.
Ma taqaanaa? Ubax Tani waxaa sidoo kale loo yaqaan "carrabta borotiinka", maxaa yeelay magaceedu wuxuu ka yimid Giriigga "salpinx" - tuubbo iyo "glossa" - luqadda.
Noocyada kala duwan ee nooca caleemaha: waxay noqon karaan finiin, dentate iyo dhan. Qiyaasta xididada caleemaha koraan on petioles, iyo sare - toosan ka soo asliga ah. Ubaxyada waa shan-xayawaan, leeyihiin foomka funniga-qaabeeya illaa 6 cm dhexroor, oo leh dusha sare.
Noocyada kala duwan ee tufaaxu waxay soo bandhigaan qaab kala duwan iyo midab. Waxay noqon karaan caddaan, cherry, bunni, bunni, casaan, iyo xarfo isbeddel ah ayaa abuuraya qaab muuqda oo dusha sare leh. Ubaxku wuxuu dhacaa Juun ilaa Oktoobar.
Warshadu waxay noqon kartaa sannadle, labadii sano ee ugu baahnayd. Waddanku waa South America.
Noocyada iyo noocyada caanka ah
In dabiiciga ah, waxaa jira ilaa labaatan nooc ee ubax this, laakiin badanaa salpiglossis sinuata (Salpiglossis sinuata) waa koray gobolka, taas oo ka kooban saddex nooc oo caan ah.
Sulpiglossis waa hooseeyaa
Faafidda dhirta qaabka baadiyaha ilaa 40 cm ee dhererka. Waxuu ku duuban yahay cuncun aad u badan. Noocyada ugu caansan ee noocan ah: "Flamenco", "Q", "Carnival", "Nanum".
Ma taqaanaa? Sulpiglossis waxaa markii hore lagu soo celiyay dalka Maraykanka 1924-kii. Gobalkeena, wuxuu u muuqday wax badan kadib.
Kala duwan tani waxaa ka mid ah noocyada ugu sareeya ee lugta lafa-jaraya iyo ubaxyo badan oo waaweyn.
Salpiglossis superpissimus waxaa lagu kala gooyaa geesaha ubaxyada ubaxa, peduncle toosan oo ku saabsan 60 cm sare.
Ubaxa waxaa lagu faafiyaa inta badan abuurka, gaar ahaan foomamka sanadlaha ah.
Ku saabsan toddobaad ka hor beerashada, qodo ciidda iyadoo lagu darayo ash, ciid iyo peat. Ubaxyada waxay doorbidi karaan waxoogaa cagaaran ama dhexdhexaad ah. Qorshaha waxaa loo doortay qorraxda, laga ilaaliyo dabaysha oo si fiican u miiray.
Seeds lagu beeray badhtamaha May, marka barafku aan la sii deyn. Seeds waxaa la geeyaa meel fog 25 cm kala gooni ah. Ubax Tani ma jeclaan transplanting, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad si degdeg ah u beeri si meel joogto ah, sidaas beerista of salpiglossis ka soo abuurka waa la doorbidaa.
Waa muhiim! Si aad u hesho ubax hore, miraha salpiglossis lagu beeray jiilaalka.
Marka loo barbardhigo dhir kale oo badan, salpiglossis waa wax aan qabin. Dhibaatada ugu weyni waxay tahay in aysan u dulqaadanin labada abaareed iyo biyo. Baahida waraabinta iska dheelitir.
Summer waa in la waraabiyaa maalin kastaFiidkii, waa suurad wacan in la buufiyo. Ciidda qallalan waxay halis gelineysaa qalajinta degdega ah iyo geerida geedka. Waraabinta ayaa ku fiican biyaha kulul. Guga iyo dayrta, waraabinta waxaa loo sameeyaa si ka yaryar, celcelis ahaan laba jeer toddobaadkii. Inta lagu jiro waraabinta ciidda sariirta ubaxa waa in si taxadir leh looga furfuro.
Dharka ugu sarreeya waxaa lagu sameeyaa bacriminta organic ama macdanta laba jeer bishii. Waxaa muhiim ah in bacrimiya geedka inta lagu jiro muddada ubax.
Habka loo xoqo caleemaha dhexe si loo sameeyo tiro badan oo ku hari waa qasab. Isla markaa la jiido, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro inflorescences jaban. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku guuleysato ubax dheer oo ubax ah.
Ka saarida geed
Xoriyad ka timid haramaha waxay u oggolaaneysaa duurka salpiglossis inuu horumar ka sameeyo awood buuxda. Sida caadiga ah, tan waxaa loo sameeyaa iyadoo la daboolayo ciidda inta lagu jiro waraabka.
Cudurada salpiglossis waxay dhici karaan inta lagu jiro roobka ama, marka loo eego xilliyada qalalan. Cadaadadiisa ugu weyn - cudurada fangas (dabaylo goor dambe, fusarium, xayr), iyo sidoo kale cayayaanka sida caarada caarada, aphids iyo thrips.
Iyada oo guuldarada fangaska, dhirta ayaa isbeddelaya midabkiisa iyo ka dibna dhibco. Daaweyntu maaha kuwo la aqbali karo, waa in la burburiyo dhirta ay saameysay.
Waa muhiim! Sida qiyaas ka hortag ah ka hor beerto, ciidda waxaa laguula dhaqmaa fungicide.
Cunto xakamaynta, marka lagu daro sunta kiimikada kiimikada, hababka dadweynaha ayaa sidoo kale loo isticmaalaa. Kala saaridda tinctures ee toonta, gooryaanka, cel celinta iyo xalinta saabuunta dharka lagu dhaqdo ayaa saameyn wanaagsan leh.
Salpiglossis waxaa loo isticmaalaa naqshada muuqaalka. Badanaa waxay ka buuxsamaan meelaha bannaan ee u dhaxeeya inta udhaxeysa. Waxaa haboon in lagu beeraa dalagyada dalaggu, gaar ahaan leh hooskii silvery ee caleemaha, si ay u iftiimaan dhammaan quruxda ubaxa. Noocyo yaryar oo sii kordhaya ayaa lagu beeray dheriyo iyo qurxin leh balakoonno iyo verandas.
Koritaanka iyo daryeellidda salpiglossies waa wax fudud, hase yeeshee way dheeraan doonaan iyagoo isha ku haya ubax qurux badan.